बुद्धको राफ्टको दृश्यावलोकन: यो के हो?
बुद्धको राफ्ट पावर
बहाव दृष्टान्त बुद्ध को धेरै दृष्टान्तहरु र सिमुलहरुको नाम भन्दा राम्रो मध्ये एक हो। बौद्धको बारेमा अलिकति चिन्ता गर्ने मानिसहरू पनि बत्तीको बारेमा सुन्नुभयो (वा, केही संस्करणहरूमा, डुङ्गा)।
आधारभूत कथा यो हो: बाटोमा यात्रा गर्ने मानिस एक पानीको ठूलो विस्तारमा आए। त्यो किनारामा उभिए, उनले यो महसुस गरे कि त्यहाँ खतरनाक र असम्भव थियो। तर अर्को किनार सुरक्षित र निमन्त्रणा प्रकट भयो।
मानिसले डुङ्गा वा पुलको लागि हेरे र न त। तर ठूलो प्रयासको साथ उनले घाँस, जुत्ता र शाखाहरू भेला गरे र साधारण बाफ्ट बनाउनको लागि उनीहरूलाई सबै सँगसँगै बाँडे। आफैंलाई बचाउन को लागी राफ्ट मा भरोसा, मानिस आफ्नो हात र खुट्टा संग चकित र अन्य किनारा को सुरक्षा सम्म पुग्यो। उनले सुक्खा जमीनमा आफ्नो यात्रा जारी राख्न सक्थे।
अब, उसले आफ्नो उत्थान भुइँमा के गर्नेछ? के उसले त्यसलाई साथ तान्छ वा पछाडि छोड्नेछ? उनले यसलाई छोडिदिए, बुद्धले भने। त्यसपछि बुद्धले बतायो कि धर्म एक बेडा जस्तो छ। यो पार गर्न को लागि उपयोगी छ तर धारण गर्न को लागी नहीं, उनले भन्यो।
यो सरल कथाले एक भन्दा बढी व्याख्यालाई प्रेरित गरेको छ। के बुद्धले भन्यो कि धर्म एक प्रबुद्ध भएको बेलामा एक प्रकारको अनन्त उपकरण हो जुन खारेज हुन सक्छ? त्यो दृष्टान्त कसरी बुझ्न सकिन्छ।
अन्य तर्कहरू (तलका व्याख्याको लागि) तर्क छ कि यो साँच्चिकै कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, वा बुझेको छ, बुद्धको शिक्षा।
र कहिलेकाहिँ कसैले पनि आठौं पथ , अवरोधहरू , र बाँकी बुद्धका शिक्षाहरू पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्न बहानाको रूपमा राफ्ट को दृष्टान्तलाई उद्धृत गर्नेछ, किनकि तपाई उनीहरूलाई डच गर्दै हुनुहुन्छ।
अल्ट्राडुपमा (जल साँप सिमिल) सट्टा-पिराका (मञ्ज्यामा निकका 22) को रत्न दृष्टान्तमा देखिन्छ।
यस सातामा, बुद्धले धर्मलाई सही तरिकामा ज्ञान र विचारमा हिसाब गर्ने खतराबारे छलफल गर्न महत्त्व गर्दछ।
सत्टा भिक्षु अर्तार्थको खाताबाट सुरु हुन्छ, जसले धर्मको गलत धारणाको आधारमा दोषी विचारहरू समातेको थियो। अन्य भिक्षुले उहाँसित तर्क गर्थे, तर अरुतथले आफ्नो स्थितिबाट गुमाउँथे। अन्ततः बुद्धलाई मध्यस्थता भनिन्छ। अरुणाको गलतफहमीलाई सच्याउन पछि बुद्धले दुई दृष्टान्तहरू पालन गरे। पहिलो दृष्टान्त पानीको सांपको बारेमा हो, र दोस्रो हो हाम्रो बहावको उदाहरण।
पहिलो दृष्टान्तमा, एक जना मानिस (असामान्य कारणहरूका लागि) पानीको सागर खोज्दै गयो। र, यकीन छ कि, उहाँले एक। तर उहाँले साँपलाई ठीकसँग बुझ्नुभएन, र यसले उसलाई जहरीला काटिएको थियो। यो कसैले तुलना गरेको छ जसको धर्मले ढोका र असामान्य अध्ययनले गलत नेतृत्वको हेराइको नेतृत्व गर्दछ।
पानी सांप को दृष्टान्त बहाव को रूप मा पेश गर्दछ। बत्तीको दृष्टान्तको निष्कर्षमा बुद्धले भने,
"एकै ठाउँमा, भिक्षुहरु, मैले एक राफ्ट को तुलनामा धम्म [धर्म] को सिकार गरेको छ, को लागि नहीं पकडने को उद्देश्य को लागि। धम्म को तुलना को रूप मा सिकार को रूप मा सिका को रूप मा, तपाईं चली जाना चाहिए यहां सम्म धम्म को पनि, गैर धर्म को केहि भन्न को लागि। " [थन्सेरो भाकिखू अनुवाद]
प्रायः सबै भन्दा धेरै सट्टा कोटा , वा होईन को बारे मा हो, जुन एकदम व्यापक शिक्षा को गलत बुझिन्छ। कसरी गलत सजिलै बुझ्न सकिन्छ गलत नेतृत्वको हेराइहरूमा नेतृत्व!
बौद्ध लेखक र विद्वान डमीन केाउनले बौद्ध एथिक्स (191 9) को प्रकृतिमा तर्क गरेका छन् कि धर्म विशेष नैतिकता, साम्दी र बुद्धि - कथामा अन्य किनारा द्वारा प्रस्तुत गरिएको छ, होइन किनारा द्वारा। राउन्ट दृष्टान्तले हामीलाई बताइरहेको छैन कि हामी बुद्धको शिक्षा र प्रबुद्धतालाई स्वीकार गर्यौं। बरु, हामी शिक्षाको अनौपचारिक र असम्भव बुझ्न सक्छौं।
थोरभैडिन भिक्षु र विद्वान तन्सारारिक भख्खुको फरक फरक दृश्य छ:
"... पानी-सांपको सिमुलेटले धुमालाई बुझ्नुको अर्थ बनाउँछ; चालले यसलाई ठीकसँग बुझ्न निषेध गर्दछ। जब यो बिन्दु पछि बेल्ट सिमुलेटमा लागू हुन्छ, त्यसको निन्दा स्पष्ट छ: नदीमा पार गर्न ठीक भट्टी मा। केवल जब एक अर्को किनारा को सुरक्षा पुग्यो छ एक हुन सक्छन्। "
राफ्ट र हीरा सूत्र
राफ्ट दृष्टान्तमा भिन्नता अन्य धर्मशास्त्रमा देखिन्छ। एक उल्लेखनीय उदाहरण डायमंड सुत्रको छैटौं अध्यायमा पाइन्छ।
डायमण्डका धेरै अंग्रेजी अनुवादहरू यस अर्थलाई बुझ्नको लागि अनुवादकहरूको प्रयासबाट पीडित हुन्छन्, र यस अध्यायका संस्करणहरू सबै नक्सामा छन्, त्यसो गर्न। यो रेड पाइनको अनुवादबाट हो:
"... डरलाग्दा बोधिसटाहरू धर्मलाई घृणा गर्दैनन्, कुनै धर्ममा धेरै कम छैन। यो ततागाटाको भन्नुको अर्थ हो, 'धर्म शिक्षण एक चोटी जस्तो छ।' यदि तपाईंले दुधममा जानुभयो भने डरमस। '"
यो हीरा सूत्र को यो बिभिन्न तरिकाहरुमा व्याख्या गरिएको छ। एक सामान्य समझ यो हो कि एक बुद्धिमान बोधिसटाले उनीहरु संग संलग्न हुन बिना धर्म शिक्षा को उपयोगिता को मान्यता दिन्छन्, ताकि उनि आफ्नो काम गरिसके पछि रिहा गरियो। "कुनै धर्म" कहिलेकाहीं विश्वव्यापी विषयहरू वा अन्य परम्पराहरूको शिक्षाको बारेमा व्याख्या गरिएको छ।
हीरा सुत्रको सन्दर्भमा, यो मूर्खतालाई पूर्ण रूपमा धर्म शिक्षालाई बेवास्ता गर्न अनुमति पर्चीको रूपमा विचार गर्न मूर्ख हुनेछ। सुत्र को समयमा, बुद्ध हामीलाई निर्देश गर्दछ कि अवधारणाहरु द्वारा बाधा न हो, यहां सम्म कि "बुद्ध" र "धर्म" को अवधारणाहरु लाई पनि। त्यस कारणको लागि, डायमण्डको कुनै अवधारणात्मक व्याख्या छोटो हुनेछ (" डायमण्ड सुटर को गहरी अर्थ " हेर्नुहोस्)।
र जबसम्म तपाई अझै अझै ठुलो हुँदै हुनुहुन्छ, खरानीको ख्याल राख्नुहोस्।
बौद्ध धर्मको दान
चीनियाँ महायज्ञ सुट्रा
अलया-विजयन: द स्टोर स्टोर हाउस
सिख धर्मको उत्पत्ति
बोधिहाटाको हजारौं शस्त्रहरू
बौद्ध परिप्रेक्ष्यबाट समयको बारेमा
डोरोथी पार्कर उद्धरण
जर्ज आर्मस्ट्रांग क्यास्टर नागरिक युद्धमा
कारखाना खेती जनावर र एन्टिबायोटिक्स, हार्मोन, आरबीएचजी
बराक ओबामा र इस्लाम
ड्रैगन, डिमन र अधिक: बौद्ध मंदिरका संरक्षकहरुको लागि एक गाइड
कुखुराको कुखुराको बिरोध
मार्गरेट मरे वेशिंगटन, टास्कके को पहिलो महिला
कतिपय रमाइलो हुन सक्छ।
1986 को आप्रवास सुधार र नियन्त्रण अधिनियम के हो?
इओनिक बनाम कोभलेंट बन्ड्स - अंतर बुझ्नुहोस
वोक्सवैगन जेटा फ्यूज मानचित्र
शीर्ष 10 डिज्नी विलियन्स ओल टाइम
10 पुस्तकहरू पढ्नु अघि तिनीहरू फिल्म हुन्
शीर्ष 10 अमेरिकी आइडल छात्र